सधैं बागीले जित्ने जनकपुरमा कांग्रेसलाई मेयर छान्नै सकस
शोभा शर्मा काठमाडौं, साउन २६
बहुदलपछिका दुईवटै स्थानीय चुनावमा जनकपुर नगरपालिका मेयर र उपमेयर कांग्रेसका बागी उम्मेदवारले जितेका थिए। बितेका २० वर्षमा जनकपुर धेरै फेरिएको छ। बागी उम्मेदवारलाई जिताउने जनकपुर मुलुककै बागी प्रदेशको महत्वपूर्ण नगर बनेको छ- संविधान र संघीयतामा असन्तुष्टि राखेर विद्रोह गरिरहेको प्रदेश नम्बर २ को यो महत्वपूर्ण नगरमा आसन्न स्थानीय चुनावका उम्मेदवार कस्ता होलान् र कसले जित्लान्?
यहाँ मुख्यत: नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राजपाले चुनावमा जाने/नजाने निर्णय गरिसकेको छैन। यो अवस्थामा कांग्रेसले कसलाई मेयर उठाउँछ भन्ने चासोको विषय हो।
अरु प्रदेशका स्थानीय चुनावमा दोस्रो भएको कांग्रेसले प्रदेश नम्बर २ मा पहिलो हुने दाबी गरेको छ। त्यसैअनुसार तयारी पनि थालेको छ।
दर्ताको अन्तिम दिन अन्तिम समयमा मात्र आफ्ना उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसले यो प्रदेशमा भने चुनावको एक महिनाअघि नै घोषणा गर्ने निर्णय गर्यो।
यही सिलसिलामा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पाँच दिनभित्र उम्मेदवार चयन गरेर पठाउन मंगलबार क्षेत्रीय संयन्त्रलाई निर्देशन दियो। त्यसको भोलिपल्टै जनकपुर उपमहानगरबाट उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको सूची जिल्ला पुगिसकेको छ।
धनुषा जिल्ला सभापति रामसरोज यादवले उपमहानगरबाट आकांक्षीहरुको सूची आइसकेको बताए। 'मेयरमा ५ र उपमेयरमा ४ जनाको नाम सिफारिस भएर आएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
मेयरमा मनोज साह, बजरंग साह, किशोरी साह, श्याम साह र प्रफुल्लराज घिमिरेको नाम छ। उपमेयरमा निलम कर्ण, सम्झना बर्मा, इन्द्रा चौधरी र अनिता श्रीवास्तव आकांक्षी छन्। यीमध्ये उपमेयरमा बलियो सम्भावना भएका कर्ण र बर्मा हुन्।
मेयरका आकांक्षी श्याम साह जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। उनलाई संविधानसभा चुनाव बेला रामसरोज यादवविरुद्ध अर्कै पार्टीका सञ्जय साहलाई भित्रभित्रै सहयोग गरेको कांग्रेसीहरुको आरोप छ। यसले उनको टिकट पाउने संभावना कम भएको धेरैले अनुमान गर्छन्।
घिमिरे कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्। पहाडी समुदायका उनलाई उठाएर चुनाव जितिनेमा कांग्रेसीहरु ढुक्क हुन सक्दैनन्।
किशोरी साह बहुदलपछिको पहिलो स्थानीय चुनावमा उपमेयर उम्मेदवार थिए। त्यो बेला मेयरमा दिगम्बर राय उठेका थिए। चुनाव भने बागी उठेका वृषेशचन्द्र लाल र लालकिशोर साहले जिते। कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक सभामा वृषेश र लालकिशोर आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार भएको भन्दै भाषण गरिदिएपछि दुवै जितेको कांग्रेसीहरु सम्झिन्छन्।
बजरंग साह २०५४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेसकै मेयर उम्मेदवार दामोदर उपाध्यायविरुद्ध बागी उठेका थिए। किशोरी भने त्यो बेला पनि पार्टीका आधिकारिक उपमेयर उम्मेदवार थिए। त्यतिबेला बजरंगलाई शेरबहादुर खेमाले सहयोग गरेको थियो। उनैले जिते पनि। उपमेयरमा किशोरी विजयी भए।
बजरंगले देउवा गुट छाडिसकेका छन्। उनले टिकट पाउलान् भन्नेमा कांग्रेसीहरु नै शंका गर्छन्। मेयर हुँदा उनी विवादमा पनि तानिएका थिए।
यसरी बागी उम्मेदवारले जित्दै आएको जनकपुरमा अब कांग्रेसले कसलाई मेयरको टिकेट देला?
चर्चामा रहेका पाँचै उम्मेदवारमध्ये धेरैले मनोज साहको सम्भावना बलियो देखेका छन्। उनी विमलेन्द्र निधि गुटका भएकाले टिकट पाउँछन् भन्ने चर्चा छ। तर, उनलाई कनिष्ठ भन्दै अर्को पक्षबाट बजरंगलाई टिकट दिन पनि लबिङ भइरहेको छ।
सांसद लीला कोइरालाले अनुभवी र सक्रियताका आधारमा बजरंगको चर्चा चलेको बताइन्।
'उहाँको नाम चर्चामा भए पनि आफैंले इच्छा देखाउनुभएको छैन। तर, उहाँ राम्रो उम्मेदवार हो। नाम चर्चामा रहेका हाम्रा सबै साथी राम्रा छन्,' उनले भनिन्, 'कसलाई उठाउने निर्णय नभइसकेकाले अरु धेरै कुरा अहिल्यै भन्न सकिन्न।'
मेयरमा महिला उम्मेदवार उठाउने चाहना पनि उनले व्यक्त गरिन्। 'त्यस्तो सक्रिय कोही देखिएन, अझै खोज्दै छौं,' उनले भनिन्।
जिल्ला सभापति यादवले भने मनोज नै बलिया उम्मेदवार हुन सक्ने बताए।
'निर्णय कसको पक्षमा हुन्छ भन्ने अहिल्यै भन्न सकिन्न। काम गर्न सक्ने, मत ल्याउन सक्ने सबै हिसाबबाट हेर्नुपर्छ,' उनले भने, 'मनोजको यहाँ धेरै राम्रो छ। युवा पनि छन् र व्यापारिक समुदायको भोट पनि उनलाई आउँछ।'
जनकपुरमा चुनाव जित्न साहु समुदायको मन जित्नुपर्ने उनले बताए। साह, तेली, कलवारजस्ता ६ जातीलाई साहु समुदाय भनिन्छ। यहाँ यहि समुदायको बाहुल्य रहेकाले उनीहरुको मन जित्न सक्ने उम्मेदवार उठाए सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
आकांक्षी उम्मेदवारहरु यही समुदायकै भएकाले यसपालिको चुनाव कांग्रेसले जित्ने उनले दाबी गरे। उपमहानगर बनाउँदा कांग्रेसका प्रभावक्षेत्रहरु गाभिएकाले चुनावमा सजिलो हुने उनको विश्लेषण छ।
क्षेत्र नम्बर २, ३ र ५ का ८ गाविस उपमहानगरमा थपिएका छन्। २ नम्बर क्षेत्र कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले जितेको हो। यहाँबाट २ गाविस उपमहानगरमा गाभिएका छन्। ३ नम्बर निधिको क्षेत्र हो। यहाँबाट पनि २ गाउँ उपमहानगरमा मिसिएका छन्। त्यस्तै, ५ नम्बर क्षेत्र चन्द्रमोहन यादवको हो, जहाँबाट २ गाउँ उपमहानगरमा गाभिएका छन्।
यी गाविसमा पनि साहु समुदायको बाहुल्य र कांग्रेसको भोट बढी भएको यादवले बताए।
यी त थपिएका गाविस मात्र हुन्, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को धेरै भाग जनकपुर उपमहानगरमा पर्छ। यहाँ दोस्रो संविधानसभा चुनाव सद्भावनाका सञ्जय साहले जितेका थिए। कांग्रेसका रामसरोज यादवलाई १२ सय मतले जितेका साहले यही समुदायको बढी भोट पाएका हुन्।
यादवका अनुसार त्यतिबेला १२ हजार मत आएको थियो। कांग्रेसका १७ सय मत बदर भएका थिए। अन्तरघातका कारण आफूले हारेको उनको बुझाइ छ।
स्थानीय पत्रकार वृजकुमार यादव यहाँका मतदाताले जातीय आधारमा भोट दिने बताउँछन्।
'अघिल्ला चुनाव हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ। यहाँ साहु समुदायको बाहुल्य रहेकाले त्यही समुदायका उम्मेदवार उठाउनेले जित्छन्,' उनले भने।
उता एमालेबाट मेयरमा दिपेन्द्र यादवलाई उठाउने चर्चा छ। तर, कांग्रेसलाई टक्टर दिने दल राजपा नै हो, जसले अहिलेसम्म चुनावमा भाग लिने/नलिने निर्णय गरिसकेको छैन। ऊ चुनावमा गए मेयरमा दुई जनाको नाम चर्चा छ, लालकिशोर साह र श्रीशंकर साह 'हिरा'।
दुवैमध्ये लालकिशोर उठे कांग्रेसलाई जित्न हम्मे पर्ने पत्रकार यादवले बताए। लालकिशोर तिनै व्यक्ति हुन्, जसले ०४८ सालको चुनावमा कांग्रेसबाट बागी उठेर उपमेयर जितेका थिए।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २६, २०७४, ०२:३९:४९